Myanmar Defence Weapons: Myanmar Navy Exercise
မြန်မာ့တပ်မတော်ရေ ရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်နေစဉ်။
mg May 7, 2011 at 4:38 AM
မြန်မာပြည်မှာလည်း လေယာဉ်တင် သင်္ဘောရှိသင့်တယ်။အိမ်နီးချင်း ထိုင်းမှာလည်း ရှိနေတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံလည်း ရှိသင့်တယ်။
xyra May 7, 2011 at 5:30 AM
ofcourse if we can get better carrier like US is even better.
But we should know our limit.!
As for our army we getting those expensive to maintain high tech equipment is not reallyagood idea.
Spending in getting compensation for those soldier who suffer from war(NO lag.arm.) & victim from war zone area willba better choice i belive.
knockout May 18, 2011 at 4:53 AM
ဟမ်မလေး ..လေယဉ်တင်သင်္ဘောတော့မလုပ်ပါနဲ့ ဦးဗျာ ..စံနစ်တကျ မြစ်တွင်း ကမ်းခြေစောင့်နဲ့မဟာဗျူဟာ သင်္ဘောအဆင့်တွေကို လုပ်ဖို့ တင်
အခု တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ တိုးတက်မှူ မျိုးနဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာရင်းရဦးမှာပါ ..တကယ်တမ်းတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကမ်းရိုးတမ်းအနေအထားနဲ့ .. အာရှရဲ့
ပထ၀ီ နိုင်ငံရေး အနေအထားအရ အင်အား တောင့်တင်းတဲ့ ရေတပ်မတော် တခုရှိဖို့ တော့အဓိကအရေးကြီးတာသေချာပါတယ် .. ဒါနဲ့ စကားမစပ် ..အပေါ်ဆုံးက ပုံက အင်းယား ၅၇.. ဒုတိယ ပုံမှာ ပထမဆုံး က ၇၇ စီးရီးက ၂ဂျီ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဒုတိယ က ၄၅ မီတာ ၅၅ စီးရီးဖြစ်မယ် တတိယ က အင်းတော် သို့ မဟုတ်အင်းယား ၅၅ သို့ ၅၇ ဖြစ်မယ် ..နောက်က နှစ်စီးက ၄၄ စီးရီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်
တတိယ ပုံနဲ့ လေးပုံမြောက်က ၅၅ စီးရီးဖြစ်မယ်ထင်တယ် Bridge နဲ့ ၃၇ မီလီမီတာ Barrel ပုံစံက ၅၅ စီးရီးမှာ ၅၅၅ နောက်က ဖြစ်ပုံရတယ် ..။
aye min January 26, 2013 at 11:20 AM
ရေငုသင်္ဘေားလေး ၃ စင်းလောက်ရှိရင်တော်သေးတာပေါ့